Falanqeynta isku-shaandheyntii uu xalay sameeyay ra’iisal wasaare Kheyre – Radio Baidoa
Falanqeynta isku-shaandheyntii uu xalay sameeyay ra’iisal wasaare Kheyre
Ma’aha wax ku cusub dhaggaha Shacabka Soomaaliyeed magacaabistan iyo isku shaan-dheyntan uu sameeyay ra’iisal wasaare Xassan Cali Kheyre waana wax la wada sugayay madaama ay jireen xilal dhowr ah oo ka bannaanaa Golaha Xukuumadda.
Laakiin arinta xiisaha badan xambaarsan ayaa ah waqtiga lagu soo beegay magacaabista xubnaha cusub ee ka mid noqonaya Golaha Wasiirrada taasoo ku tuseysa hadal heyn mar horeba sii jirtay oo aheyn in ra’iisal wasaaruhu la sugayo qaadista tallaabadan inta laga faraxalanayo khilaafkii hareeyay Golaha Shacabka ee ugu danbeyntii sababay in uu xilka iska casilo Prof Jawaari.
Marka la eego tirada guud ahaan xubnahan cusub ee la magacaabay waa 13 Wasiir, kuwaa oo 12 ka mid ah laga soo dhax xulay Golaha Shacabka marka laga soo tago Daahir Maxamuud Geelle oo hadda safiirka Soomaaliya ee dalka Saudi Arabia.
Wasaarradaha ka bannaanaa Golaha xukuumadda ee la soo buuxiyay ayaa kala ah, Gaashaandhigga oo uu iska casilay guddoomiyaha Baarlamaanka ee xiliggan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Warfaafinta oo uu horay u hayay Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisoow, Maareynta Masiibooyinka oo ay iska casishay Drs Maryan Qaasim Axmed, Tamarta iyo Biyaha oo uu iska casilay Saalam Caliyoow Ibroow, Diinta iyo Ow-qaafta iyo Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guriyenta oo Wasiirkii xilkaa hayay Saadiq Cabdullaahi Cabdi uu ku baxay isku-shaandheyntii xalay lagu sameeyay golaha.
Cabdicasiis Xassan Maxamed Lafta-gareen ayaa noqday wasiirka kaliya ee ka soo laabtay wasiirradii musharixiinta noqday ee isku soo taagay qabashada xilka guddoonka Golaha Shacabka, waxaana uu hadda helay Wasiir buuxa oo ah wasiirka Tamarta iyo Biyaha madaama uu markii hore ahaa Wasiiru-dowle.
Lafta-gareen sidoo kale waxaa lagu xasuusta in uu ahaa qofkii saddexaad ee codadka ugu badan ka helay doorashadii Golaha Shacabka.
Daahir Maxamuud Geelle oo loo magacaabay Wasiirka Warfaafinta ayaa horay xilkan u soo maray, waxaana lagu tilmaamaa in uu yahay shaqsi ku haboon Wasaaradda loo magacaabay.
Wasiirka kaliya ee gabi ahaanba ka baxay xukuumadda ayaa noqday Wasiirkii Howlaha Guud iyo Guriyenta Saadaq Cabdullaahi Cabdi oo horay xilka loogu magacaabay kaddib markii uu geeriyooday Wasiirkii hore ee Wasaaraddan Ex Xildhibaan Cabaas Siraaji oo toogasho lagu dilay.
Xilka Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guriyenta ayaa loo magacaabay Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geeseey oo laga soo doorto Koonfur Galbeed waxaa uu ka mid ahaa xildhibaannadii sida weyn uga soo horjeeday mooshinkii ka dhanka ahaa guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Prof Maxamed Cismaan Jawaari.
Wasiirka Gaashaandhigga ayaa loo magacaabay Xassan Cali Maxamed oo ah nin dhalinyaro ah waxaana uu noqonayaa Wasiirkii saddexaad ee soo mara Wasaaraddan mudaddii koobneyd oo ay xukuumaddani jirtay.
Dad badan ayaa maanka ku hayay in ra’iisal wasaaraha isku-shaandheyntiisan iyo magacaabista cusub uu ku soo dari doono shaqsiyaad siweyn uga dhax muuqday ololihii lagu riday guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka islamarkaana taageero mug leh u muujiyay xukuumadda oo si gaar ah loogu eedeeynayay in ay ku lug laheyd qalalaasihii Baarlamaanka, taa badalkeedana waxaa uu ra’iisal wasaare Kheyre u xushay xilalka rag ku cusub intooda badan siyaasada una badan dhalinyaro.
Wasaaradda Maaliyadda oo la wareegtay lacagihii ay qaban jirtay Wasaaradda Kaluumeysiga
Halkee ayuu Marayaa Dhismaha Wadada Muqdisho Iyo Afgooye?
Diyaarad Gargaar siday Oo ka Degtey Degmada Xuddur